काठमाडौंमा रेन्टल अपार्टमेन्टः कुन अपार्टमेन्टको भाडा कति? – साँचो खबर
काठमाडौंमा रेन्टल अपार्टमेन्टः कुन अपार्टमेन्टको भाडा कति?
अटो अर्थ खबर
December 9, 2020 Deep Devkota
काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने चलन पुरानै हो । यहाँको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भाडाकै घरमा बस्छन् । काठमाडौंबासीका लागि घरभाडा सबैभन्दा सुरक्षित आम्दानी पनि हो । यहाँका कतिपय घरधनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेकै घरभाडा बनेको छ । घरहरु पनि भाडामा दिन मिल्ने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा काठमाडौंमा ब्यबस्थित सामूहिक आवास अर्थात् अपार्टमेन्टको रेन्टल कारोबार राम्रै बृद्धि हुन थालेको छ । सबैजसो ठूला अपार्टमेन्टमा साना ठूला युनिटहरु भाडामा उपलब्ध छन् ।
खासगरी स्तरीय आवासमा सबैजसो सुविधा हुने र तुलनात्मक रुपमा शहरी क्षेत्रमा रहने भएकाले स्तरीय तर छरितो बसाई चाहने ग्राहकहरु अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर बस्न रुचाउँछन् ।
अपार्टमेन्टमा बस्दा जीम, स्वीमिङ पुल, खेल मैदान, खुला ठाउँ, प्रशस्त पार्किङ लगायत सुविधाहरु पनि उपभोग गर्न पाइन्छ । तर, अपार्टमेन्टमा जति धेरै सुविधाहरु उपलब्ध हुन्छन्, त्यति धेरै भाडा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
रियलस्टेट एजेन्सी इजिहोम सोलुसनका सञ्चालक भुवनेश झाका अनुसार काठमाडौंमा मासिक २० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर बस्न पाइने अपार्टमेन्ट उपलब्ध छन् । सानेपाको इम्पेरियल अपार्टमेन्ट र विशालनगरको सेन्ट्रल पार्क उपत्यकाकै महंगो भाडा भएका अपार्टमेन्ट मानिन्छन् जहाँ बस्नका लागिअधिकतम् मासिक ३ लाखसम्म घरभाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
महंगा अपार्टमेन्टहरु प्रायः विदेशीको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । नेपालीहरु तुलनात्मक रुपमा सस्ता अपार्टमेन्टमा बस्न खोज्ने झाको अनुभव छ । सम्भवतः मुलुककै पहिलो अपार्टमेन्ट बुद्धनगरको स्तुपा कोलोनीमा मासिक २० हजार घरभाडा तिरेर बस्न पाइन्छ ।
यसरी तय गरिन्छ घरभाडा
अपार्टमेन्टको भाडा तय गरिने प्रमुख आधार भनेको लोकेसन हो । अपार्टमेन्ट जति प्रिमियम र सेन्ट्रल हटस्पटमा ठडिएको छ, घरभाडा पनि त्यति नै महंगो पर्ने झा सुनाउँछन् ।
दोस्रो आधार भनेको अपार्टमेन्टमा उपलब्ध सुविधाहरु हुन् । अपार्टमेन्टमा जति धेरै सुविधाहरु (जीम, खेल मैदान, ज्याकुजी, साउना, थियटर, स्वीमिङ पुल आदि) हुन्छन् त्यति धेरै घरभाडा पनि महंगो पर्छ ।
अपार्टमेन्ट कति स्क्यारफिटमा फैलिएको छ भन्नेले पनि घरभाडा निर्धारण गरिदिने नेपालभूमि रियलस्टेट एजेन्सीका सञ्चालक बिक्रम लामा बताउँछन् । ‘जति फराकिलो अपार्टमेन्टमा बस्न खोज्नुहुन्छ त्यति नै धेरै भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ’ उनी थप्छन् ।
प्रायः अपार्टमेन्ट फुल फर्निसिङ हुन्छन् । कतिपय अपार्टमेन्टमा आफै भाडा बस्नेले फर्निसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । अपार्टमेन्ट फर्निसिङमा राम्रै खर्च हुने भएकोले भाडा निर्धारणमा फर्निसिङले भूमिका खेल्छ । फर्निसिङ नगरिएका अपार्टमेन्टमा तुलनात्मक रुपमा भाडा कम पर्छ ।
अपार्टमेन्टका सबैभन्दा माथिल्लो तलामा पेन्ट हाउस बनाइएको हुन्छ । पेन्ट हाउसबाट वरिपरिका दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । पेन्टहाउसले अलि ठूलो क्षेत्रफल पनि ओगटेका हुन्छन् । र, सेवा सुविधा पनि अलि बढि नै हुन्छन् । पछिल्ला दिनमा सुविधा सम्पन्न र महंगा पेन्टहाउस पनि भाडामा पाउन थालिएको छ ।
कुन अपार्टमेन्टको भाडा कति ?
इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, सानेपा
ललितपुरको सानेपा हाईटमा रहेको इम्पेरियल अपार्टमेन्ट सम्भवतः मुलुककै सबैभन्दा भव्य र सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट हो । लोकेसनका हिसावले पनि सानेपा उपत्यकाकै हटस्पट भइहाल्यो । यो अपार्टमेन्टमा बस्नका लागि एक लाख ५० हजारदेखि २ लाखसम्म भाडा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । पेन्ट हाउसको भाडा अझ महंगो छ ।
यो अपार्टमेन्टमा ३ बेडरुमका अपार्टमेन्ट छन् । कतिपय अपार्टमेन्ट डुप्लेक्स (भित्रबाटै दुई तला) छन् । यहाँका सबै अपार्टमेन्ट फुल फर्निसिङ हुन् ।
यहाँ धेरैजसो विदेशी परिवार भाडामा बस्छन् । यसै पनि झम्सिखेल र सानेपा विदेशीहरुले रुचाउने क्षेत्र हो । यहाँ पुरै घर लिएर बस्ने विदेशी धेरै छन् । मारवाडी समुदायका परिवार पनि यो अपार्टमेन्टमा बस्ने गरेको झा बताउँछन् ।
यहाँ प्रयाप्त खुला ठाउँ, स्वीमिङ पुल, जीम, ज्याकुजी, साउना, खेल मैदान, प्रर्याप्त पार्किङ लगायत सुविधा छ । माथिल्ला तलाबाट शहरको राम्रो दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
सेन्ट्रल पार्क अपार्टमेन्ट, विशालनगर
काठमाडौंको बिशालनगरमा अबस्थित सेन्ट्रल पार्क लोकेसनका हिसावले प्रिमियम मानिन्छ । यो अपार्टमेन्टमा डिपार्टमेन्टल स्टोर, एटीएम लाउन्ज, ब्याडमिन्टन कोर्ट, हेल्थक्लब, इनडोर र आउटडोर स्वीमिङ पुललगायत सुविधाहरु रहेका छन् । इनडोर स्वीमिङ पुलमा तातो पानी आउने हुँदा जाडोको मौसममा उपयुक्त हुन्छ ।
यो अपार्टमेन्टमा रेन्टमा बस्नका लागि दुई बेडका लागि ८० देखि एक लाख रुपैयाँ, तीन बेडको एक लाख १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म, चार बेडरुमका लागि एक लाख ३० हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्ने रियलस्टेट एजेन्ट झा बताउँछन ।
यस्तै, पेन्टहाउसका लागि दुई लाखदेखि तीनलाखसम्म भाडा तोकिएको छ । यो अपार्टमेन्टमा आधा दर्जनभन्दा बढी पेन्टहाउस छन् ।
सिटी स्केप, हात्तीवन
यो अपार्टमेन्टमा तीन बेडरुम भएको फ्ल्याट लिएर बस्नका लागि ५० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । दुई बेडरुमको अपार्टमेन्ट ३५÷४० हजार रुपैयाँमै पाइन्छन् ।
यो अपार्टमेन्टमा पनि सुरक्षा गार्ड, जीम, स्वीमिङ पुल, राम्रो पार्किङ, खुला ठाउँ, खेल मैदानलगायत सुविधाहरु छन् ।
डाउनटाउन अपार्टमेन्ट, हात्तीवन
यो अपार्टमेन्टमा बस्नका लागि पनि तीन बेडरुमको ५०÷६० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । दुई बेडरुमको अपार्टमेन्ट लिँदा ३५÷४० हजारमै पाइन्छ । यहाँ पनि सुरक्षा गार्ड, राम्रो पार्किङ खुला ठाउँ, खेल मैदानलगायत सुविधाहरु रहेको झाको भनाई छ ।
क्लासिक अपार्टमेन्ट, हात्तीवन
क्लासिक अपार्टमेन्टमा खुला ठाउँ र खेल मैदान छैन । तर, जीम र स्वीमिङ पुलको सुविधा छ । यहाँ भाडामा बस्नका लागि पनि तीन बेडरुमका लागि ५०÷६० हजार र दुई बेडरुमका लागि ३५÷४० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ ।
सिटी भ्यू अपार्टमेन्ट, झम्सिखेल
यो अपार्टमेन्टमा खेल मैदान र स्वीमिङ पुल छैन । तर, अपार्टमेन्ट शहरको प्रिमियम लोकेसनमा छ । त्यसैले पनि यहाँ विदेशी नागरिक बढी बस्छन् । डाउनटाउन हाउजिङले विदेशीलाई लक्षित गरी यो अपार्टमेन्ट बनाएको हो । यहाँ बस्नका लागि दुई बेडरुम अपार्टमेन्टको ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म भाडा पर्छ ।
स्ट्रलिङ अपार्टमेन्ट, झम्सिखेल
झम्सिखेलको स्ट्रलिङ अपार्टमेन्ट पनि विदेशीलाई लक्षित गरी बनाइएको हो । गोल्छा परिवारले बनाएको यो अपार्टमेन्टमा जीम र स्वीमिङ पुल छैन् । झाका अनुसार अरु आधारभूत सेवा सुविधाहरु सबै उपलब्ध छन् । यो अपार्टमेन्टमा पनि त्यतिखुला ठाउँ छैन । प्रिमियम लोकेसन भएका कारण यहाँ भाडामा बस्नका लागि तीन बेडरुमको एक लाख २० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बज्र एन्ड सांग्रिला अपार्टमेन्ट, झम्सिखेल
झम्सिखेलको यो अपार्टमेन्टमा स्वीमिङ पुल, जीम, सामूहिक बगैंचा, अलिअलि खुला ठाउँ पनि रहेको छ । अपार्टमेन्टमा हुनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाहरु पनिउपलब्ध छन् । दुई बेडरुमको लागि ४० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । यस्तै, तीन बेडरुमका लागि ६५ हजारदेखि ७५ हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्ने झाले जानकारी गराए ।
प्रेस्टिज अपार्टमेन्ट, चन्डोल
चन्डोलमा रहेको प्रेस्टिज अपार्टमेन्टमा तीन बेडरुमका मात्र अपार्टमेन्ट भाडामा उपलब्ध हुन्छन् । यो अपार्टमेन्टमा बस्नका लागि ७० हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ पनि जीम, स्वीमिङ पुल र खेल मैदानको सुविधा छ ।
वेस्टार रेसिडेन्सी, बालकुमारी
यो पनि सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट हो । तर, लोकेसनका हिसावले अलि टाढा हुनाले तुलनात्मक रुपमा अपार्टमेन्टको भाडा सस्तो छ ।
यो अपार्टमेन्टमा दुई बेडरुम र तीन बेडरुमका अपार्टमेन्ट भाडामा पाइन्छन् जसको मूल्य ५० हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यहाँ स्वीमिङ पुल, जीम, जयकुजी, साउना, प्रशस्त खुला ठाउँ, मुभि थियटर, इनहाउस क्याफे लगायत सुविधा सम्पन्न छ ।
कम्फर्ट हाउजिङ, पानीपोखरी
यो अपार्टमेन्टमा बस्नका लागि दुई बेडरुमको ८० हजार रुपैयाँ र तीन बेडरुमको एक लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । शहरको मध्यतिर रहेको यस अपार्टमेन्टमा जीम र स्वीमिङ पुल छ तर खुला ठाउँ छैन ।
हिलटेक अपार्टमेन्ट, पानीपोखरी
पानीपोखरीकै हिलटेक अपार्टमेन्टमा तीन बेडरुमका अपार्टमेन्ट भाडामा पाइन्छन जसको मूल्य ६० हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।
केएल रेसिडेन्सी, सानो गौचरन
भाडामा दिनका लागि तीन बेडरुम अपार्टमेन्ट मात्र छन् । यो अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर बस्नका लागि एक लाख देखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म भाड तिर्नुपर्छ । यहाँ पनि जीम, स्वीमिङ पुल र खुला ठाउँ छ ।
विभोर अपार्टमेन्ट, कमलपोखरी
शहरको हटस्पट लोकेसन मानिने कमलपोखरीमा रहेको विभोर अपार्टमेन्टमा तीन बेडरुमका फ्ल्याटहरु छन् । अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर बस्नका लागि एक लाखदेखि डेढ लाखसम्म भाडा तिर्नुपर्ने झा बताउँछन् । यहाँ जीम र स्वीमिङ पुल छ, खुला ठाउँ छैन ।
सिल्भरसिटी अपार्टमेन्ट, कालिकास्थान
कालिकास्थानको गगनचुम्बी अपार्टमेन्ट सिल्भरसिटीमा तीन बेडरुमदेखि ५ बेडरुमसम्मका अपार्टमेन्ट उपलब्ध छन् । यहाँ अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर बस्नका लागि ८० हजार रुपैयाँदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । यो अपार्टमेन्टमा पनि जीम, स्वीमिङ पुल र खुला ठाउँ छ । यो अपार्टमेन्ट काठमाडौं उपत्यकाको दृश्यावलोकनका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट छ ।
भाटभटेनी अपार्टमेन्ट, टंगाल
हटस्पट लोकेसन टंगालमा रहेको भाटभटेनी अपार्टमेन्टमा बस्नका लागि दुई बेडरुमको ८० हजारदेखि तीन बेडरुमको एक लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । यो अपार्टमेन्टमा पनि जीम, स्वीमिङ पुल र खुला ठाउँ छ ।
ग्रान्डी अपार्टमेन्ट, टोखा
टोखाको ग्रान्डी अपार्टमेन्टमा पनि ४० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर बस्न पाइन्छ । यहाँ दुई बेडरुमको लागि ४० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँ र तीन बेडरुमको लागि ६० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तोकिएको छ ।
समग्रमा काठमाडौंका अपार्टमेन्टको बसाई मूल्यका हिसावले पराम्परगत घरका फ्ल्याटभन्दा केही महंगो पर्छ । मुख्य शहरी क्षेत्रका आवासीय भवनहरुमा एउटा फ्ल्याटकै मासिक ३० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ जसको क्षेत्रफल औसतमा १ हजार स्क्वायर फिट पनि हुँदैन् । तर, सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्टहरुमा ३०–४० हजारमै फर्निसिङ गरिएका अपार्टमेन्ट युनिटहरु पाइन्छन् । जहाँ तपाइले आधुनिक जीवनशैलीको बसाई अनुभव लिन सक्नुहुन्छ ।
nepalhomes.com को सहयोगमा
Flash News अर्थ खबर
महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सले पनि आईपीओे ल्याउने
January 24, 2021 January 24, 2021 Deep Devkota
Flash News अर्थ खबर बजार
Previous: मेसीलाई कहिल्यै पनि प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिनँ : रोनाल्डो
Next: तीन दिन सम्म तराईमा हुस्सु र काठमाडौंमा आंशिक बदली
Flash News अन्तर्राष्ट्रिय
ताइवानको आकाशमा चीनले पठायो युद्धविमान
अबको आन्दोलन झनै ठूलो हुन्छ : प्रचण्ड
वरुणको विवाहमा करण जोहरको भावुक पोस्टः लेखे, ‘मेरो केटो हुर्कियो
मोबाइल चोरीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या,पशुपतिमा जलाउँदै गरेको शव प्रहरीद्वारा बरामद
देश अब अगाडि बढिसकेको छ : प्रधानमन्त्री ओली